Levitikus 8 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
8 Wahlabela mgama uYehova ethetha kuMoses, esithi: 2 “Thabatha uAron kunye noonyana bakhe+ nezambatho+ neoli yokuthambisa+ nenkunzi yenkomo yomnikelo+ wesono neenkunzi zegusha ezimbini nengobozi yamaqebengwana angenagwele,+ 3 uyihlanganisele yonke indibano+ emnyango wentente yokuhlangana.”+ 4 Wenza uMoses kanye njengoko uYehova wayemyalele ngako, wayihlanganisela indibano emnyango+ wentente yokuhlangana. 5 Wathi ke uMoses kwindibano leyo: “Yiyo le into anikele umyalelo ngayo uYehova ukuba yenziwe.”+ 6 Ngoko uMoses wamsondeza uAron noonyana bakhe waza wabahlamba+ ngamanzi.+ 7 Emva koko wamnxibisa umwunduzo,+ wambhinqisa umbhinqo,+ wamambesa nesambatho esingenamikhono,+ wamnxibisa iefodi+ waza wambhinqisa umbhinqo+ we-efodi, wayibopha ntshi ngawo. 8 Wandula ke wamfaka ubengo+ waza elubengweni olo wafaka iUrim neTumim.+ 9 Wamfaka unkontsho+ entloko waza elunkontshweni olo ngaphambili wabeka ipleyiti ekhazimlayo yegolide, engumqondiso ongcwele wokuzinikela,+ kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses. 10 Waza uMoses wathabatha ioli yokuthambisa, wawuthambisa umnquba+ kunye neento zonke ezikuwo, wazingcwalisa. 11 Emva koko watshiza ngenxalenye yayo esibingelelweni izihlandlo ezisixhenxe waza wasithambisa isibingelelo+ nempahla yaso yonke nesitya nesiphatho saso ukuze zingcwaliswe. 12 Ekugqibeleni wagalela inxalenye yeoli yokuthambisa kuAron entloko, wamthambisa ukuze angcwaliswe.+ 13 Wabasondeza ke uMoses oonyana baka-Aron,+ wabambesa imiwunduzo, wababhinqisa umbhinqo,+ wabathandela ngesigqubuthelo sentloko,+ kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses. 14 Wandula wasondeza inkunzi yenkomo+ yomnikelo wesono waza uAron noonyana bakhe babeka izandla zabo phezu kwentloko+ yenkunzi yenkomo leyo yomnikelo wesono. 15 Waza uMoses wayixhela,+ wathabatha igazi+ walidyobha ngomnwe wakhe wajikeleza iimpondo zesibingelelo, wasisulungekisa isibingelelo eso esonweni, yona inxalenye eseleyo yegazi wayigalela esisekweni sesibingelelo, wasingcwalisa ukuze acamagushele+ kuso. 16 Emva koko wawathabatha onke amanqatha asemathunjini nomhlehlo wesibindi nezintso zombini nenqatha lazo waza waqhumisela ngazo uMoses esibingelelweni.+ 17 Ke inkunzi yenkomo nesikhumba sayo nenyama yayo nomswane wayo wazitshisa ngomlilo ngaphandle kwenkampu,+ kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses. 18 Wayisondeza inkunzi yegusha yomnikelo otshiswayo, wandula uAron noonyana bakhe babeka izandla zabo phezu kwentloko yenkunzi yegusha leyo.+ 19 Emva koko uMoses wayixhela waza walifefa igazi wajikeleza isibingelelo.+ 20 Wayinqunqa uMoses inkunzi yegusha ngokwamalungu ayo,+ waza waqhumisela ngentloko namalungu namanqatha. 21 Wawahlamba amathumbu namanqina ngamanzi, waza uMoses waqhumisela ngenkunzi yegusha iphela esibingelelweni.+ Ngumnikelo otshiswayo lowo onevumba elithozamisayo.+ Ngumnikelo wasemlilweni lowo kuYehova, kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses. 22 Wandula ke wasondeza inkunzi yegusha yesibini, inkunzi yegusha yokumiselwa,+ waza uAron noonyana bakhe babeka izandla zabo phezu kwentloko yenkunzi yegusha leyo. 23 Emva koko uMoses wayixhela waza wathabatha inxalenye yegazi layo, waliqaba endlebeni yasekunene ka-Aron nakusithupha wesandla sakhe sasekunene nakubhontsi wonyawo lwakhe lwasekunene.+ 24 UMoses wasondeza oonyana baka-Aron, waqaba inxalenye yegazi endlebeni yabo yasekunene nakusithupha wesandla sabo sasekunene nakubhontsi wonyawo lwabo lwasekunene; lona igazi eliseleyo walifefa uMoses wajikeleza isibingelelo.+ 25 Wandula ke wathabatha inqatha nomsila otyebileyo namanqatha onke asemathunjini,+ nomhlehlo wesibindi nezintso zombini nenqatha lazo nomlenze wasekunene.+ 26 Yaye engobozini yamaqebengwana angenagwele eyayiphambi koYehova wathabatha iqebengwana elibusazinge+ elingenagwele lalinye neqebengwana elibusazinge lesonka esineoli+ lalinye nesonka esisicaba sasinye.+ Waza wazibeka phezu kwamanqatha nomlenze wasekunene. 27 Emva koko wazibeka ezo zinto entendeni ka-Aron nasentendeni yoonyana bakhe waza wazitshangatshangisa zaba ngumnikelo otshangatshangiswayo phambi koYehova.+ 28 Uphindile uMoses wazithabatha entendeni yabo waza waqhumisela ngazo esibingelelweni phezu komnikelo otshiswayo.+ Zaba ngumbingelelo wokumiselwa+ wevumba elithozamisayo.+ Yaba ngumnikelo wasemlilweni kuYehova lowo.+ 29 Wayithabatha uMoses incum+ wayitshangatshangisa yaba ngumnikelo otshangatshangiswayo phambi koYehova.+ Yaba sisahlulo+ sikaMoses eso kwinkunzi yegusha leyo yomiselo, kanye njengoko uYehova wamyalelayo uMoses. 30 Emva koko uMoses wathabatha intwana yeoli yokuthambisa+ nentwana yegazi elaliphezu kwesibingelelo waza watshiza ngalo uAron nezambatho zakhe noonyana bakhe nezambatho zoonyana bakhe abakunye naye. Ngaloo ndlela wamngcwalisa+ uAron nezambatho zakhe noonyana bakhe nezambatho zoonyana bakhe+ abakunye naye. 31 Wathi uMoses kuAron noonyana bakhe: “Yiphekeni+ inyama emnyango wentente yokuhlangana, niyidle+ khona apho nesonka esisengobozini yomiselo, kanye njengoko ndayalelwayo, kwathiwa, ‘UAron noonyana bakhe boyidla.’ 32 Okuseleyo enyameni nasesonkeni nokutshisa ngomlilo.+ 33 Yaye nize ningaphumi emnyango wentente yokuhlangana imihla esixhenxe,+ kude kube ngumhla wokuzaliseka kwemihla yokumiselwa kwenu, kuba kuya kuthabatha imihla esixhenxe ukumiselwa kwenu.+ 34 Kanye njengoko kwenziwe ngako namhlanje, uYehova uyalele ukuba kwenziwe njalo ukunicamagushela.+ 35 Nohlala emnyango wentente yokuhlangana imini nobusuku imihla esixhenxe,+ niyigcine imbopheleleko yenu kuYehova,+ ukuze ningafi; kuba ndiyalelwe ngaloo ndlela.” 36 Wazenza uAron noonyana bakhe zonke izinto awaziyalelayo uYehova ngoMoses.